Review sách Ngang qua thế giới của em | Anybook.vn - Anybook
Review sách Ngang qua thế giới của em | Anybook.vn
Izaho dia anao avy amin’ny mpanoratra Truong Gia Giai dia boky tsotra misy hafatra: Miaina amim-pireharehana sy amim-piravoravoana mba tsy handaniana tanora.
Manerana ny tontolon’ny ianareo dia boky fifangaroan’ny prosa izay nodiovin’i Truong Gia Giai tao amin’ny “Tantara alohan’ny hatoriana” (ilay tsanganana noforonin’ny mpanoratra hitantarana ny tantarany ao amin’ny tambajotra sosialy Shinoa – Tianya). Amin’ny maha-mpitantara tantara azy, Truong Gia Giai dia toy ny matoky tena, matoky ary mamaly ny fanontaniana sy ny ahiahin’ny olona an-tapitrisany alohan’ny hatoriana. Be dia be ny olona manao hoe: tantaram-pitiavana telo cents fotsiny ity boky ity, fako, na dia tsy misy fiandohana na fiafarana aza, ka mahatonga ny fikorianan’ny lahatsoratra tsy milamina, mitohana, sarotra be ny mamaky pejy roanjato. Betsaka koa anefa ny mihevitra fa tena tsara izy io satria mahasarika ny mpamaky hitomany sy hihomehezana tena izy isaky ny pejy.
Boky Manerana ny Tontoloko – Sary: familybooksvn
“Amin’ny andro ratsy, nesoriko ny ratra tao am-poko ary nozairiko tsara, satria ao izy, mety ho lena amin’ny orana.” (voalaza ao amin’ny Manerana ny tontolon’ny em).
Manerana ny tontolon’ny ianareo dia hampahatsiahy anao ny fitiavanao ny zaridaina, fa aza misintona anao ho ao anatiny. Isaky ny alina dia isaky ny toko. Ny toko tsirairay dia tantara vaovao. Misy fitiavana avy amin’ny lafiny maharary izay tsara tarehy sy madio. Misy koa ny fitiavana avy amin’ny fo roa mafana sy mamy. Misy ny fitiavana mandalo ny oram-baratra rehetra ary miverina amin’ny tsirairay.
Ny tantara tsotra sy tsotra eo amin’ny fiainan’ireo olona I-Truong Gia Giai, Quan Xuan, Tieu Ngoc, Mercy dog, Thap Bat Nhat, Lohan-kisoa, sns dia hahatonga anao hahatsapa ho toy ny misy manodidina anao foana. Ny toko tsirairay dia mamarana ny mpanoratra amin’ny fehezanteny roa na telo amin’ny filozofian’ny traikefany manokana. Ho an’ny olona maro, ireo filôzôfia ireo angamba dia somary misafotofoto sy lalina.
“Na dia mitohy aza isika, dia mety hifanipaka.
Izaho mamakivaky ny tontolonareo, ary ianareo kosa mandalo ny tontolon’ny tsirairay.
Toy izany koa ny manirery, fa mbola milina miresaka fotsiny isika, miresaka mandritra ny andro, milaza izay rehetra tokony holazaina, avy eo manao namana amim-pahanginana.
Lalana tokana ny fiainana, tsy misy segondra iray fotsiny dia mifamoivoy ho an’ny fiainana. Misy ny fihetseham-po lehibe indrindra ao am-pon’ny tsirairay, indraindray tsy voatery hoe fitiavana izany. Fihetseham-po tsara tarehy nefa marefo hatrany amin’ny tsy fahatanterahana, mora very. Olona mitovy amin’ny fotoana miaraka aminao, saingy tsy mitovy mandritra ny androm-piainany. Ka misy olona tsy mandalo ny tontolonao ve fa miandry anao any amin’ny faran’ny lalana? Fanontaniana tsy maintsy laninao mandritra ny androm-piainana izany mba hahitana ny valiny.
Nofaranan’i Zhang Jiajia ny alin’ny fitantarany toy ny nilazan’i Scheherazade tamin’ny Mpanjaka mahery setra ny tantara arivo sy tapany, nanaitra sy nitantara tantara any an-danitra sy ety an-tany, mitantara tantara avy amin’ny lafim-piainana rehetra. ary tiavo fatratra.
Ny fitiavana voalohany dia ny fikorontanan’ny olona iray
Satria matetika isika no manao tsinontsinona ny tsy fahatanterahan’ny zavaboary, dia manombantombana ny fahaizantsika manokana koa isika, ka mandalo amin’ny tontolon’ny tsirairay tsy fantatra toy ny nandalovan’i Truong Gia Giai tamin’ny fitiavana voalohany tsotra sy romantika.
“Tamin’ny taona voalohany tamin’ny oniversite, nandeha avy any amin’ny faritany lavitra ny namako Khuong Vi mba hitady ahy. Nomeny bara Singum Doublemint aho.
– Afaka mihinana voky ve ianao?
– Antsoy aho rehefa noana ianao!
– Tsy misy vola ho an’ny sakafo, aiza no hahazoana vola hanaovana antso an-telefaona.
– Dia raiso ity karatra finday ity.
– Mihinana tsy misakafo akory, inona no ataonao amin’ny karatra.
– Ento avy eo ny karatry ny banky.
Nirotsaka ny ranomasoko, karatra finday, karatra banky, noana aho, fantatrao?
Taorian’izay dia nifampiantso izahay sy Khuong Vi nandritra ny antsasaky ny taona.
Tsapako izao zava-dehibe izao: rehefa malahelo ahy ny ankizivavy, dia matetika izy ireo no mitomany an-telefaonina. Ary rehefa malahelo ahy ny reniko, dia matetika izy no mitomany rehefa manantona ny finday.”
“Dimy taona taty aoriana, naharay vaovao aho fa hanambady i Khuong Vi sy ny namako. Mankasitraka ny valopy mitentina dimanjato yuan arivo aho. Vola mitentina dimy hetsy dia malama, mahitsy, tsy misy fikotranana na dia iray aza.
Naveriko tamin’ny farany ny faktiorany dimy hetsy yuan, ka ilay fonon-kazo Singum Doublemint maitso ihany no nitazona azy.
Ny fonon’ny Singum Doublemint maitso dia fisaka, mahitsy, tsy misy fikororohana na dia iray aza.
Io no fitiavana voalohany an’i Truong Gia Giai.
Ny fitiavana voalohany dia mampikorontana azy ary manosika azy ho lehibe. Miaina ny antony maha-samihafa ny tontolon’ny lehilahy sy ny vehivavy toa an’i Venus sy Mars izy.
“Hatramin’ny andro nanombohako niasa dia afaka manamafy hatrany aho fa, amin’ny maha-vehivavy anao, dia tokony hividy kosmetika avo lenta sy firavaka lafo vidy ianao, na dia lafo aza izany, dia mendrika izany.
Noho izany dia mbola miasa mafy aho manao akanjo latsaky ny dimanjato dong, manao short tsy misy marika, satria te-hitsitsy vola aho mba ahafahan’ny vadiko mampiasa ny makiazy tsara indrindra sy ny firavaka sarobidy.
Saingy taty aoriana dia nahatsikaritra zava-misy aho: ny vehivavy dia afaka mahita makiazy avo lenta, firavaka marevaka, fa tsy mahita lehilahy mendrika. Satria ny ankamaroan’ny lehilahy mendrika dia tsy afaka mividy makiazy sy firavaka lafo vidy.”
“Efa niteny anao aho:
– Rehefa afaka izany, te-hividy na inona na inona izy, aza misalasala. Na dia nilaza aza izy fa tsy mila izany, dia mbola nividy an-tsokosoko ho azy.
Nanontany ny namako hoe:
– Satria feno akanjo, ba kiraro, fehiloha, lambam-pandriana ary mops ny lavaranganao! Tsy maintsy tompon’andraikitra amin’ny fanonerana ny segondra rehetra nandaniany ny fahatanorany teo amin’ny lavaranganao ianao. “
Amin’ny fahatanorana amin’ny olona roa, raha ny rariny, ny vehivavy foana no tena sahirana. Satria mba hisian’ny fifankatiavana eo amin’ny samy olona eo anivon’ny fiainana feno habibiana, dia ny vehivavy foana no mahafoy tena amim-paharetana. Na izany aza, misy ny fifankatiavana terena ho faty satria raha tsy izany dia hisy foana ny alahelo mandrakizay izay tsy mitsahatra. Indraindray isika dia manirery, tsy noho ny tsy fisian’ny olona eo amin’ny manodidina, fa satria efa ela no niaraka tamin’ny olona iray izay mahatonga antsika ho irery.
Noheverinay fa mety hamokatra ny tantaram-pitiavanay, saingy tsy nampoizinay fa ho maina sy halazo alohan’ny fahamaizan’ny natiora. Samy manana ny fahatanorany ny tsirairay, iray ihany ny fitiavana voalohany ny tsirairay, koa aza avela hijaly na dia iray aza ny fahatanoranao. Raha tia olona ianao dia teneno fotsiny hoe fitiavana. Raha mankahala olona ianao dia lazao fotsiny hoe mankahala. Avelao ny tanora hiaina mandrakizay ao anatin’ny fo feno hafaliana toy ny hoe “fisaka, mahitsy, tsy misy fikotranana” ny fitiavantsika voalohany, na dia nampijaliana an’arivony toy inona aza.
Fiaran-dalamby tanora tsy misy olona
“Nihaona taminao aho tamin’ny fararano. Efa ho tapitra izao ny fahavaratra, angamba folo taona lasa izay, ianao no niandry ahy teto. Ianao no hazavan’ny volana miboiboika miaraka amin’ny onjan’ny rano mamely ny fasika. Famaritana ho an’ny boky entin’ny rivotry ny fotoana ianao. Tara-pahazavana manjelatra ianao, mimonomonona ao anaty riaka. Enga anie mba ho eny rehetra eny ny fararano, mba hilazana mandrakizay ny famantarana fiatoana fa tsy mbola tapitra ny volana aogositra. Amin’io lamasinina misy fizaran-taona efatra io, raha tsy maintsy midina aloha ianao, aza fohazina aho rehefa mody matory, avelao aho hatory am-piadanana mandra-pahatongan’ny fiantsonana farany, ary mampitony ny tenako, tsy fantatro fa niala ianao ” .
Ireo no andalana Truong Gia Giai izay tadidiko indrindra. Misy tantara tsy antsika, tsy afaka manao afa-tsy mpitantara isika. Truong Gia Giai dia nitana ny anjara asany tamin’ny tantara feno fihetseham-pon’ny tanora rehetra.
Namana Quan Xuan, namana akaiky amin’ny toetra “I”, izay nanokatra trano fisotroana, saingy nilalao be, zara raha nitantana ny fivarotana, ka nahatonga ny fivarotana ho nidina tsikelikely hatramin’ny saika mihidy, ary nisy sipa tsara ihany koa nandeha. miaraka amin’ny olon-kafa. Tena nanohina ny foko ny nahita azy nirotsaka an-tsitrapo hanitsaka entona nirohotra niditra tao anaty fiara, ilay tovovavy sahirana amin’izao fotoana izao noho ny vadiny taloha, nandoa ny fahavoazana, nikiakiaka foana hoe: faly ianao.
Sa tantara momba ny lainga be vava, vava misy poizina, malahelo an’i Duyet Duyet sipany, ka voatery nandeha tany an-toerana ny reniny mba hampandroso izany fitiavana izany.
“Hoy ilay nenitoa:
– Manamavo anareo tanora aho. Telopolo taona vitsivitsy izay efa mierona; “Ny fiainana am-piadanana no tena fiainana”. Mendrika ve ianareo? Nandeha tany an-tendrombohitra aho, tany an-dranomasina, tovolahy manan-tsaina, nijaly noho ny hanoanana, ahoana no ahafantaranao ireo traikefa ireo. Amin’izao andro izao, be fanantenana sy faly aho, rehefa manana fotoana malalaka aho dia manao lalao mahjong telo, matory aloha ary mifoha maraina, mieritreritra ianareo fa tonga ho azy ny fiainako milamina, latsaka avy any an-danitra aho. te-hilamina. sure? Matetika ny moanina no miteny hoe, rehefa tapitra ny fiainana, dia tsy maintsy mahafantatra ny fomba fijery ny tendrombohitra ho tendrombohitra, fa efa mba nijery ny tendrombohitra ve ianao fa tsy tendrombohitra? Fony izy mbola tanora dia tsy nety niditra tamin’izao tontolo izao, tsy nety nikodiadia, tsy niditra tamin’izao tontolo izao, ary nangataka ny hivoaka. Heverinao ve fa Bodhisattva sy Bodhisattva avy any Nirvana ianao? Ny fiainana milamina sy tsotra ananako dia vokatry ny asa mafy sy fahasahiranana nandritra ny taona maro, fantatrao? Ary ny fiainana milamina resahinareo dia hakamoana, tahotra, kanosa, toy ny alika ambanivohitra mihazakazaka eny an-dalambe amin’ny tahotra. Nandeha ilay sipa tsy nahalala ny lalana hanenjika! Ary apetraho amin’io vehivavy antitra io ny tsiny rehetra! Vendrana!
– Osa sy tsy zakako ny fanerena, ny fahalalako voafetra, ny olona lava sy ory, mbola mitady fomba hiainana, fa miafina ao an-joron-trano fotsiny aho, hoy ny fanaratsiana, hotdog, latsako! Hatramin’ny maraina ka hatramin’ny alina, mahay misaina tetika maloto ihany. Ny vola lany dia azo atao bebe kokoa, raha very indray mandeha ianao dia mbola afaka manao izany indray, fa inona no atao rehefa tsy eo intsony ny fahatanoranao? Raha mankany amin’ny tafika ianao, dia afaka miala, fa tsy niady teto, fa nitaky fanamavoana ny sorona. azonao lazaina ve? Raha afaka miresaka ianao dia mihazakazaka mankany Hunan ary lazao amin’ny olona fa tianao ny hanambady azy!
Namoaka taratasy mavo ilay nenitoa ary niteny hoe:
– Ity no taratasy nosoratan’ilay anti-panahy taminareo, mba hovakinareo. Tsia, diso fampandrenesana momba ny faktioran-jiro very aho.
Fandalovana kely fotsiny eo anivon’ny fiainana lehibe izany. Somary mifanakaiky, mifandona ny fitiavana teo amin’ny lasa sy ny ankehitriny. Saingy ireo zavatra kely kely ireo dia manampy antsika hahatsapa zavatra lehibe maro.
Rehefa tia olona isika dia hilavo lefona, hahafoy ny zavatra rehetra mba hahasambatra azy, na dia fantatsika aza fa mandalo fotsiny ny tontolon’ny tsirairay.
Nodimandry ny renin’i Lying, saingy mbola nanana taratasy mba hitazomana ny fahatanorany niaraka taminy sy Duyet Duyet izy:
“Ry Comrade Luu Tuyet malala. Tena tiako ianao ry namana. Nangataka ny lehibeko aho hamela ahy hifindra any Nanjing, saingy tsy nety izy ireo. Nanapa-kevitra ny hametra-pialana aho. Mbola tsy haiko tsara ny fanomezana ny asa.
Miomàna handray ahy any Nanjing azafady.
Ry sakaizako Luu Tuyet, tsy mahay miteny aho, saingy manana zavatra hozaraina aminao aho. Te hiaraka aminao mandrakizay aho.
Sary: lii_leelii – Manerana ny tontoloko
Ka mandra-pahoviana no mandrakizay? Fitiavana hatreo amin’ny nify sy ny volo ve, sa fotoana fohy fotsiny amin’ny tanora express tsy misy mpamily, dia mbola matory mangina, mody tsy mahalala hoe lasa ilay olona?
Mandrakizay ao anatin’ilay toerana mahafinaritra sy mamiratra amin’io tanora io, isika tsirairay avy dia miaina amin’ny fomba feno, miavonavona sy mafana, mifanakaiky, manampy hafanana amin’ny fiainana, tsy mangatsiaka kokoa. Andeha isika hiezaka hiaina ny fihetseham-po mampandefitra indray mandeha, hanao sorona ny tsara indrindra ka amin’ny farany, na dia mpitantara fotsiny aza isika eny an-tsisin-tany, dia ho lasa mpitantara tsara tarehy sy mangina ao ambadiky ny pejy mavitrika sy tanora amin’ny boky iray. olona iray ihany.
Rohy hividianana ilay boky:
Linh dia tonian-dahatsoratra sarotra, tezitra ary tena sarotiny amin’ireo izay manao typo matetika.
Toetrany nefa tsy mahay miara-monina, tsara tarehy nefa mora manafintohina
READ 9 quyển sách hay về Hacker tiết lộ những thông tin chưa từng được biết đến | Anybook.vn
Previous: “Đốn Tim” 99+ Hình Ảnh Bé Gái Sơ Sinh Dễ Thương, Cute Nhất Việt Nam | Anybook.vn
Next: Bạn có đang mắc chứng ngại giao tiếp? | Anybook.vn